Ihe oru SEO nile ka emere na ahia?
Ọ bụ nkwupụta ụgha na ọrụ SEO bụ maka nnukwu ụlọ ọrụ dị iche iche. Ọ dịkwa mma maka obere ụlọ ahịa na obere ego. Usoro SEO a kpachapụrụ anya nke ọma bụ ụzọ kachasị adabere ma rụọ ọrụ nke ọma iji gboo mkpa azụmahịa gị ma banye na TOP nke engines ọchụchọ.
Dịka data nchịkọta akụkọ, ihe karịrị pasent 80 nke nnukwu ụlọ ọrụ na ihe fọrọ nke nta ka ọkara nke obere ụlọ ọrụ nwere atụmatụ ahịa. Ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi na atụmatụ SEO bụ usoro ga-abụ nke a na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa n'Ịntanet.
Ya mere, ka anyị tụlee otú ebe nrụọrụ weebụ na-aga nke ọma si enweta ebe ha nọ taa.
Nkọwa nke atụmatụ SEO
Atụmatụ ọrụ SEO dịka mgbatị nke atụmatụ achụmnta ego nke na-enye ndị nwe ụlọ ọrụ otu atụmatụ nkwado maka ịme ihe mgbaru ọsọ achụmnta ego. Ọ na-enye ntụziaka doro anya maka ndị ahịa n'Ịntanet ka ha si eme ka saịtị ha gaa Google. Atụmatụ a na-enye ohere niile dị oke mkpa yana egwu ọ bụla ị ga-enwe. Ọ chọrọ nlezianya atụmatụ na nyocha yana ịchọta ihe kachasị dị mfe nke usoro nyocha. Usoro SEO gị gụnyere ntụziaka nzọụkwụ site na ntụziaka ka ị ga-esi mejuputa atụmatụ kachasị mma iji melite njirimara akara gị ma bulie ọnụego mgbanwe.
Olee ihe mere eji wuo atụmatụ SEO?
Nke mbụ, ị chọrọ atụmatụ SEO n'ihi na ọ ga-enyere gị aka ilekwasị anya n'oge niile dị mkpa nke mgbasa ozi kachasị mma.
Ị ga-agbalịrị ịchọta otu ebe na-enweghị adreesị na oge a kapịrị ọnụ? N'ezie, ị nwere ike inwe obi ụtọ. Otú ọ dị, ịnwere ike kwụsịkwa na steeti ọzọ. Ị natawo oku site n'aka ndị na-ahụ maka mgbasa ozi mpaghara ebe ha na-anwa imeju ụfọdụ ohere mgbasa ozi? Nkwekọrịta a nke ikpeazụ na-ekpo ọkụ na-ere iji na-ere oge ikuku ma ọ bụ ohere mgbasa ozi nwere ike ịbịaru iwu nkwụsị mma. Ya mere, ọ bụrụgodị na mgbasa ozi ahụ nwere ezi uche, mkpebi nke ikpeazụ nwere ike ịpụta na ị na-eji ego ị na-adịghị mkpa iji meefu ma ọ bụ ego ịkwesịrị iji tinye ego na mpaghara ọzọ. Mgbe ị na - atụkọta ihe niile ga - esi na ya pụta, ị ga - enwe ike ịghọta na mkpebi gị agaghị emeli ihe mgbaru ọsọ gị ma ọ bụ naanị ego ị ga - akwụ.
Ya mere, ọ bụrụ na ị nweghị oge na-akparaghị ókè ma ọ bụ ego ego na-enweghị ngwụcha, ị chọrọ ọrụ SEO ziri ezi iji mee ka azụmahịa gị na-aga n'ihu ma gbanwee ego gị.
Ọzọkwa, ị ga - achọpụta na ihe mgbaru ọsọ ịzụ ahịa gị nwere ọgụgụ isi - nke a kapịrị ọnụ, nke dị nfe, nke a pụrụ ịchọta, nke nwere ezi uche na oge. Atụmatụ gị kwesịrị igosi atụmatụ atụmatụ azụmahịa gị, ma n'ụzọ doro anya Source .